Fiqi oo ka hadlay go'aanka Shirka Dhusamareeb 3 | KEYDMEDIA ONLINE
Fiqi oo ka hadlay go’aanka Shirka Dhusamareeb 3
Shirkii Dhuusamareeb 3 oo xalay la soo gabagabeeyay ayaa laga soo saaray War-murtiyeed qeexaya in dalku aado doorasho dad-ban oo tirada Ergada wax dooraneysa, deegaanada lagu dooranayo la kordhiyay hanaan xisbina lagu galayo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay heshiiskii ay xalay doorashada dalka ka gaareen madaxweyne Farmaajo, madaxda maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Fiqi ayaa sheegay in shirkii Dhuusamareeb 3 uu jiho la fahmi karo u bixiyay doorashada dalka oo aheyd mid nooceda lagu jahwareersanaa, balse hadda la jiheeyay, isagoona ku tilmaamay doorasho dadban iyo nooc la yiraahdo wada guuleysta.
"Dhuusamareeb 3 dalka doorashadiisii ur bay u baxisay, luqad la fahmi karo iyo doorasho dadban-toosan iyo model la yiraahdo “wada guulaysta” ayaa ka soo baxay!" ayuu yiri Wasiirka oo qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay kaga hadlay arintaan.
Sidoo kale Wasiir Fiqi ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo ka tanaasulay mowqifkiisa ahaa in dalka ay ka dhaceyso doorasho qof iyo cod ah, sidoo kale madaxdii maamulada ay iyagana ka yimaadeen doorasho si toos ah u dadban.
"Waxaa muuqata in madaxweyne Farmaajo uu ka tanaasulay doorashadii Q&C aheyd, dawladaha xubnaha ka ah DFS intoodii Shirka ka qeybgashayna ay ayana ka yimaadeen doorasho si toos ah u dadban." ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi
"Dhusamareeb 3 dalka doorashadiisa saldhig iyo aasaas ayaa looga taagay iyo meel wax looga sii dari karo." ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Shirkii Dhuusamareeb 3 oo xalay la soo gabagabeeyay ayaa laga soo saaray war-murtiyeed qeexaya in dalku aado doorasho dad-ban oo tirada Ergada wax dooraneysa, iyo deegaanada lagu dooranayo la kordhiyay, iyadoona doorashada lagu saleeyay in hanaan xisbi lagu galo.